Home Wararka Maanta Rooble oo la kulmay Wakiilada Beesha Caalamka (SAWIRRO)
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta la kulmay qaar ka mida Wakiilada Beesha Caalamka ee dalka.
Kulanka ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka ee dalka, u diyaargarowga Shirka Wadatashiga Qaran iyo taageerada Beesha Caalamka ee geedi-socodka doorashooyinka.
Wakiilka Midowga Yurub ee Somaliya, Amb. Nicolas Berlanga oo ka qaybgalay kulankaasi ayaa dhanka kale boggaadiyay dadaalada uu wado Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay “Waad ku mahadsan yahay Ra’iisal Wasaare Rooble inuu maanta la shiro la-hawlgalayaasha Somaliya. Ka qayb qaadashadiisa dhisidda kalsoonida ayaana muhiim ah.
Dhacdooyinkii toddobaadyadii la soo dhaafay waxay muujinayaan Shir Madaxeedka soo socdaa inuu yahay fursadda keliya ee hartay ee lagu muujiyo, sida uga go’an tahay mustaqbalka Somaliya. Midkoodna maaha inuu kharibo ama hor istaago heshiis.”
Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa maalinta Khamiista lagu wadaa in uu Magaalada Muqdisho ka furo shirka lagu dhameystirayo arrimaha doorashooyinka ee dalka, shirkaasi oo ay ka qaybgeli doonaan Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir.
Previous articleDuqa Muqdisho oo dhagax dhigay Buundooyinka Waaber & Xamar Jajab
Next articleMadaxweyne Guudlaawe oo kormeeray buqda Baareey (SAWIRRO)